Librem yatotanga kutumira nhare dzayo dzakagadzirwa muUnited States | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memwedzi mishoma yekunonoka, mugadziri akaburitsa pachena izvo iri kutanga kutumira kweLibrem 5 USA, iyo, senge mamodheru apfuura, inochengetedza chengetedzo uye zvakavanzika mabasa eLibrem 5 software.
Musiyano ndewekuti iyo vhezheni yeUS inobatsirwa kubva kune 'yakajeka uye yakachengeteka cheni yekupa, inogadzirwa muUnited States. ' Izvo zvinoita kuti ive imwe yenzira dzakachengeteka kune mafoni eIOS uye eApple ayo makuru tekinoroji anopa, sekureva kwekambani muvambi.
Kune avo vasingazivikanwe neLibrem 5, iwe unofanirwa kuziva kuti iyi foni yakavakirwa paPureOS, sosi yakavhurika, yakasununguka-inoshamwaridzika uye inogoneswa zvizere sisitimu yekushandisa iyo isingabvi pane Android kana iOS. Iyo ine yakasarudzika yemahara switchch kuti ibvise iyo cellular modem, WiFi neBluetooth, pamwe ne maikorofoni uye makamera.
Librem 5 yakavakwa kubva pasi kumusoro nePurism zvichitevera mushandirapamwe wakabudirira wekusimudzira mari uyo wakakwidza kudarika $ 2.2 miriyoni. Dhizaini ye Hardware nesoftware inoitirwa kuremekedza rusununguko rwemushandisi wekupedzisira.
Iyo yekutanga kukwidziridzwa, Librem 5 USA, sosi yezvikamu kuburikidza nekambani inodzorwa uye yakachengetedzwa yeUS neine izere nemagetsi kugadzira kunoitwa pamuzinda wePurism weUS Iyo kambani inoti iyo nyowani Librem 5 USA inotevera mitemo yakasimba yevashandi, yezvakatipoteredza neyezvinhu Kubva kuUS, kunoshanda muUS, zvinounza pamwechete yakavimbika Hardware uye yakachengeteka software, zvese mune imwe foni, anodaro.
"Zvigadzirwa zvedu zvinosangana nemusika mukuru," akadaro Todd Weaver, muvambi wePurism uye CEO, mune chinyorwa chekugadzira iyo US vhezheni yeLibrem 5. "Ndezve kuvaka ramangwana rehunyanzvi rinoremekedza vanhu. Zvigadzirwa zvedu zvinokurudzira rusununguko rwema dijitari, zvinopa chengetedzo yakanaka kwazvo uye kuchengetedza zvakavanzika, zviri pakati pechinangwa chedu. "
"Kugadzira nhare inodzivirira kushora kubva kune yakakura tech ndechimwe chinhu (hongu, takazviita). Kugadzira inoshandurwa sisitimu inoshanda isiri iyo Android kana iOS imwe (hongu, isu takaitawo izvozvo). Asi kugadzira iyi foni muAmerica ndeyevashoma vanotenda zvinogoneka (hongu, tangozviita). Hatina kungoratidza chete kuti zvinokwanisika… asi tiri kuzvitumira, ”akadaro Weaver mutsamba yake.
Misiyano mikuru pakati pezvigadzirwa ndeyekuti Librem 5 inogadzirwa pasi pechibvumirano muChina, nepo iyo Librem 5 USA inogadzirwa kufekitori yePurism muCarlsbad, California. Iyo PCBA (mamaboard gungano) kudhindwa wedunhu) Librem 5 (iwo mahwendefa maviri mukati mechassis) zvinogadzirwa kuChina. MaPCBAs anobva aunganidzwa muLibrem 5 chassis uye ndokuzounzwa kufekitori muUnited States kugungano rekupedzisira, kupenya, kuyedza uye kuuraya.
Librem 5 USA PCBAs inogadzirwa kuCarlsbad chirimwa muUnited States. Ivo vanobva vaunganidzwa pane Librem 5 chassis, uye musangano wekupedzisira, kupenya, kuyedza, uye kuendesa kunoitika pane iyo Purism chirimwa. Mumwe mutsauko uri mumutengo: iyo Librem 5 inodhura $ 799 uye iyo Librem 5 USA inodhura $ 1,999.
Kugadzira yako Librem 5 foni muUnited States, kusanganisira kugadzira zvese zvigadzirwa zvemagetsi mumba, yaive imwe yezvinangwa zvakawanda zvePurism. Uye iye akangosvika pazviri nekutanga kwerwendo rweLibrem 5 USA. Librem 5 USA runhare rwekuchinja rune musiyano mukuru nemamwe ese indasitiri yenharembozha.
Achitaura kubva mukugadzira kwayo kusvika pakutakura, Todd Weaver anoti:
"Kuti ugadzire foni yakachengetedzeka, unofanirwa kuve nekuferefetwa kwakakwana kwematanho ese, kubva pakudhinda masystem kusvika pakushandisa Made in USA zvemagetsi, kutsikisa kodhi yekodhi, kuisa zvikamu zvehardware uye mashandiro ehurongwa hwekushanda huri pasi kudzora kwese kwemutengi, izvo zvisiri zvekumanikidzwa kumanikidza nekudzvinyirira kudzora tekinoroji hombe, Librem 5 USA ndizvo zvese izvo ".
Muvambi wePurism anotsanangura zvakavanzika uye chengetedzo matanho anoonekwa nemapoka ake kubva mukugadzira uye kuongorora (katatu cheki) kwezvikamu kugadzirira nekutumira mirairo kune vatengi, kusanganisira, pakati pevamwe, kuongororwa kwemakadhi ("microscopically, pellet nepellet, kumusoro uye pasi pekadhi, kuona kuti maitiro ese anotevera anoitwa aine mashoma ekukanganisa ”).
Sekureva kwa Weaver, kuongorora kwacho kwaive kwekutanga kusanganiswa kwema mechanical kuongorora uye kuongorora kwebhuku. Asi kana iro vhoriyamu rawedzera, kuongororwa kuri kushoma manyore uye kwakawanda zvoga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Librem yatotanga kutumira nhare dzayo dzakagadzirwa muUnited States
Microsoft inodzokera kuchido chekugadzira accounting account yakapihwa simba ne blockchain